सोमवार, असोज १२, २०७७
मन्दिर पुनःनिर्माणमा विभिन्न बैंकको सहयोग
६ महिने बालकसहित एकै परिवारका ९ जनाको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु, दागबत्ती दिने कोहि भएन !
३२ देशबाट ८० हजार १६ नेपाली स्वदेश फर्किए
खोटाङ कोरोना संक्रमणमुक्त जिल्ला
बिहीबार पुल्चोकका आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन खटिएका १८ प्रहरीसहित ५६ जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
आन्दोलन नियन्त्रणमा खट्ने एक इन्स्पेक्टरसहित ५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
संक्रमित हुनेमा बिहीबार ललितपुरको पुल्चोकमा भएको झडप नियन्त्रणमा खटिएका १८ प्रहरी समेत छन् । रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ स्वस्फूर्त तान्न खोज्ने युवालाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा झ डप भएको थियो ।
त्यहाँ भिड नियन्त्रण गर्न खटिएका ललितपुर प्रहरी परिसर र सातदोबाटोका १८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएपछि आइसोलेसन बस्नुपर्ने नियम बनाएको छ । तर ती प्रहरीलाई स्वाब दिएपछि पनि भिड नियन्त्रणमा खटाएको पाइएको छ ।
यस्तै ललितपुर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका १५ जना, महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंका १५ प्रहरी र महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका ८ जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
ललितपुरको पुल्चोकमा राखिएको रातो मच्छिन्नाथ रथ विधिवत रूपमा बिहीबार तान्दै गुठियार र स्थानीयवासी । गत वैशाख १८ र १९ गते तान्नुपर्ने रथ कोभिड १९ को सङक्रमण न्यूनीकरण गर्न सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका कारण रोकिएको थियो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शुक्रबार, भदौ १९, २०७७ १९:१२:२३
मुगुको राराताल जाने छोटो सडक बन्यो
पर्यटक नआएपछि सौराहामा हात्तीको व्यवस्थापन सहकारीको अवधारणामा
चितवनमा सशस्त्र प्रहरीको दुईवटा बीओपी स्थापना
नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा विज्ञ टोली पठाउन आग्रह
कठोर शब्द ! दुई मिनेट समय दिएर पढ्नुहोस